थाइल्यान्ड जान्छु भनेर हिँडेका मुख्यमन्त्री सुटुक्क अमेरिका पुगे, सरकारको अनुमति किन लिएन? – Rastriyapatrika
थाइल्यान्ड जान्छु भनेर हिँडेका मुख्यमन्त्री सुटुक्क अमेरिका पुगे, सरकारको अनुमति किन लिएन?
काठमाडौँ — उपचार गर्न थाइल्यान्ड जान्छु भनेर हिँडेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई सुटुक्क अमेरिका पुगेका छन् । प्रदेश छाडी देशभित्रै पनि हिँडडुल गर्न संघीय सरकारको अनुमति लिनुपर्ने नियम छ ।
राईले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘निजी भ्रमण’ भने पनि अमेरिकामा उनले मुख्यमन्त्रीकै हैसियतमा त्यहाँस्थित नेपाली समुदायबाट सम्मान ग्रहण गरेका छन् । उनलाई आदिवासी जनजाति महासंघ अमेरिकाले ज्याक्सन हाइटमा बुधबार साँझ सार्वजनिक सम्मान गरेको थियो । उक्त महासंघले प्रधानमन्त्री केपी ओली राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन अमेरिका पुगेका बेला भने कालो झन्डा देखाएर विरोध प्रदर्शन गरेको थियो ।